Horonan-tsary momba ny tantaram-piainana, sarimihetsika komity, sarimihetsika heloka bevava, sarimihetsika Drama - Heart Galaxy
Sehatra famandrihana matihanina
Fiaraha-miasa manodidina sy samihafa
Manana traikefa, mafy orina ary azo atokisana
Tantara renibeny tsara tarehy nandray anjara tamin'ny filentehan'ny masoandro telozoro, lehiben'ny orinasa nilentika tamina trosa telozoro rojo, mpivady mpifankatia niady tamin'ny tena fiainana sy ny fitiavam-pitiavana teo afovoan-tanàna, fianakaviana afaka teo amoron'ny tanàna… Under kisendrasendra isan-karazany, noho ny alika majika "Juice" niseho, nanomboka niova ny anjaran'ny vahoaka rehetra ... Ekipa Zhou Chong Qian Yu Mengjie Jiang Xiaotian ...
Tantara Tamin'ny ririnin'ny taona 1950 dia nisy ady feno rà nifanaovan'i Etazonia sy i Shina tany amin'ny faritry ny farihin'i Changjin izay nanjary mangatsiaka. Nandefa ny tratrany trompetra tsara indrindra i China sy Etazonia ho an'ny ady - ny Corps 9 an'ny Mpiasa an-tsitrapo ataon'ny vahoaka sinoa, ny fizarana 1 an-dranomasina sy ny diviziona faha-7. Ekipa Kaige Chen Dante Lam Hark Tsui Jing Wu Guoli Zhang Hanyu Zhang Jackson Yee Jerry ...
Tantaraina fa i Zheng Qian izay nandositra ny tranony sahady talohan'i (Allen), niverina tany amin'ny tanànany Ke Xiqike hanatrika ny fandevenana ny raibeny, mahita tsy nahy kanefa, ny fianakaviana dia afaka mitarika fahaizana mihoatra ny fotoana miaraka .Mandra-pahatongan'izany, mifanatrika amin'ny ratsy i Qian Zheng ben'ny tanàna Qiqikov (Teng Shen) izay maka ny fampiharana azy. Qian Zheng dia voatery niray hina tamin'ny fahaizan'ny fianakaviana lehibe hanohitra an'i Qiqikov miaraka amin'ny Team Yang Song Teng Shen ...
Tantara Onmyoji Seimei, izay mandeha eo anelanelan'ny tontolon'ny olombelona sy ny demonia, dia miteraka loza ary ao anaty krizy noho ny fifanarahana tamin'ny demonia. Mandritra izany fotoana izany dia miverina ny herin'ny amperora demonia, efa ho avy ny ady mahery vaika. Amin'izao fotoana sarotra izao rehefa miova ny toe-javatra ary mikorontana ny toe-draharaha, dia hitan'i Seimei tampoka fa ny maha-hybrid azy no lakilen'ny rehetra ireo loza ireo… .. Ekipa Weiran Li Kun Chen Xun Zhou ...
Tantara Ilay zazavavy Jia Xiaoling izay vao nanadihady oniversite (Jia Ling) dia nandalo tsy nahy tamin'ny 1981, nihaona tamin'ny renin'ny tanora Li Huanying (Zhang Xiaofei) .Raha hampifaly bebe kokoa ny reniny dia nivadika ho reniny izy Ny tsara indrindra, manampy azy hahita olon-tiana. tsy vitan'ny hoe Mampihetsi-po ny lalàna handrisihana ny reny hifankatia, fa hanampy ihany koa ny "taranaka 2" Shen Guanglin (Shen Teng) haneho fitiavana an'i Li Huanying, avy eo nanokatra ...
Ny tantaran'i Bao Bao dia tsy dia mifantoka amin'ny fanadiovana sy drafitra, izay nihevitra fa mpanakorontana ny fisakaizana sy ny fitiavana izy, fa indray mandeha mihaona amin'i Wen Nuan Song, tovovavy tia tena toetra, dokotera "nerve" Jia ary fihatsarambelatsihy Wei ren Wang, tantara mahatsikaiky mahatsikaiky… Team Yuan Chang Qin Li Teng Shen Shan Qiao Tale Yuan Chang (1981-09-25) Mahua Funage nanao sonia mpilalao sarimihetsika / veloma Andriamatoa Loser, Salama Andriamatoa Milyardera, Aza Sa ...
Tantara: nisy fipoahana tany Hong Kong, ilay manam-pahaizana momba ny baomba Pan Chengfeng (Andy Lau) teo aloha izay tsy nahatsiaro tena teny an-toerana, dia ahiahiana ho voarohirohy amin'izy ireo. Tsy afaka mandositra i Pan cheng feng raha te hahalala ny marina. Tamin'io fotoana io ihany anefa vao nifoha, ny sakaizany Dong Zhuowen (Liu Qingyun) sy ny sakaizany Pang Ling (Ni Ni) dia nitantara zavatra roa samy hafa be dia be tao aminy. compl ...
TantaraNy aura avy any an-danitra sy ety an-tany dia niteraka hery be dia be tamin'ny vakana mifangaro, Yuan Shi Lord dia hamboarina vakana voadio ho vakana sy pilina majika, vatana vaovao amin'ny vatana vaovao indray, manampy an'i Zhou, ary ny pilina majia dia ho teraka mpanjaka devoly, ho an'ny tontolon'ny loza. Yuan Shi Lord dia nanomboka ny ody avy any an-danitra, ho avy ny kotroka ary handrava ilay pilina majika 3 taona taty aoriana. Nasaina nanolotra ny perla an'i Nezha, zanaky ny fianakavian'i Li Jing tao Chentangguan, i thuanyi.
Tantara Ny tantara dia nitranga tao an-tanànan'i xihong, tanànan'ny "Olana manokana" ao amin'ny "Olana ao Charlotte". Ilay mpilalao baolina kitra Wang Duo Yu (Teng Shen) izay mifangaro amin'ny làlana ekipa amateur an'ny diviziona fahatelo, satria resy ny lalao, dia voaroaka tamin'ny ekipa. Tamin'ny fotoana farany ambany indrindra tamin'ny fiainany dia nanaiky ny fanambin'ny fifanarahana Mysterious Taiwan "lany $ 1 miliara isam-bolana" izy. Heverina fa manomboka amin'ity fotoana ity ny fiainana sambatra, saingy mahatsapa i DuoYu Wang ...
Tantara Tokyo nitranga tranga lehibe iray hafa taorian'ny Bangkok, New York. Ilay mpitsikilo any Chinatown Tang Ren sy Qin Feng dia nasaina hamaha ny raharaha tamin'ny mpitsikilo Noda Hao .Nivory tao Tokyo ihany koa ireo mpitsongo avy amin'ny "CRIMASTER World Detective List" hanatevin-daharana ny fanamby, ary ny fisehoan'ny No. 1 Q dia mahatonga ny tranga lehibe kokoa Sarotra sy mahasadaikatra, ary efa hatomboka ny fifaninanana eo amin'ireo mpitsongo mahery vaika indrindra any Azia.
Tantara lozam-pifamoivoizana tamin'ny fidirana an-tsekoly tamin'ny alin'ny campus, nanova ny nanjo ny zatovo roa. Ny toetran'i Chen Read (Zhou Dongyu) dia navadika, izay mpianatra mahay ao an-tsekoly, mandinika mafy, maka fanadinana tsara amin'ny oniversite tsara. ny hany hevitra momba ny fiainany an-tsekoly 3 taona .Ny lozam-pifamoivoizan'ny mpiara-mianatra aminy dia ny fitarihana tantara maromaro tsy fantatra, i Chen Nian koa dia tafiditra ao anatin'izy ireo… Amin'ny ora mangina indrindra, ...
Tantara: Fianakaviana miady amin'ny homamiadana roa, lalam-piainana roa. Mitantara tantaram-piainana mafana ny sarimihetsika, mieritreritra ary miatrika ny olana farany atrehan'ny olon-tsotra rehetra - alaivo an-tsaina hoe mety ho tonga amin'ny fotoana rehetra ny fahafatesana, sarobidy indray mandeha ny aina noho ny fitiavana, ny hany mila ataontsika dia ny mitia sy mankamamy. Ekipa Ting Han Jackson Yee Hao cun liu Yuan yuan Zhu Yalin Gao Tale Ting Han (1983-11-16) / Go Away Andriamatoa Tumor (201 ...
Raharaha tetikasa mahomby
Sarany sarimihetsika: 350 tapitrisa
Biraon'ny boaty: 5,40 miliara
Fizarana boaty: 4,95 miliara
Sarany sarimihetsika: 250 tapitrisa
Biraon'ny boaty: 1,2 miliara
Fizarana boaty: 1,1 miliara
Biraon'ny boaty: 1,43 miliara
Fizarana biraon'ny boaty: 1,30 miliara
Sarany sarimihetsika: 150 tapitrisa
Biraon'ny boaty: 1,55 miliara
Fizarana boaty boaty: 1,43 miliara
Sarany sarimihetsika: 500 tapitrisa
Biraon'ny boaty: 3,17 miliara
Fizarana boaty boaty: 3,0 miliara
Biraon'ny boaty: 5,68 miliara
Fizarana biraon'ny boaty: 5,31 miliara
Sarany sarimihetsika: 300 tapitrisa
Biraon'ny boaty: 3,1 miliara
Fizarana biraon'ny boaty: 2,88 miliara
Biraon'ny boaty: 2,91 miliara
Fizarana biraon'ny boaty: 2,70 miliara